कति कडा रिसमीको रिस, श्रीमानका औंला पोलेर खाइन् ! « Naya Page
कति कडा रिसमीको रिस, श्रीमानका औंला पोलेर खाइन् !
दाङ : मानिसले वध गरेर विक्रीका लागि राखेको मासु त जुन पायो त्यहि खाँदैनन् । मासुमा पनि मानिसको आफ्नै रुची हुन्छ । अझ मानिसको मासु खाने कुरा त विश्वमा अपवादका घटना बाहेक हुँदैनन् भन्दा हुन्छ । तर, नेपालमा पनि यस्तै घटना भएको छ । श्रीमानको हातका औंला काटेर पोलेर खाएको अभियोगमा दाङ्गको तुलसीपुर प्रहरीले एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१ भम्के छोटे बस्ने ६४ वर्षीया रिसमी महतरालाई प्रहरीले पक्रेको हो ।
उनले गए राति ८ बजेतिर श्रीमान चन्द्रबहादुरको दायाँ हातका चार वटा औंला काटेर पोलेर खाएको उजुरी परेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको तुलसीपुर प्रहरीले जनाएको छ । चन्द्रबहादुरलाई बिहीबार बिहान उपचारका लागि तुलसीपुर ल्याएपछि घटना सार्वजनिक भएको हो । राप्ती अञ्चल अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारका लागि चन्द्रबहादुरलाई नेपालगञ्जतर्फ पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बुधबार राति मदिरा सेवन गरी घर आएका श्रीमानलाई समातेर उनले घरेलु हतियारले औंला काटिदिएकी थिइन् ।
आवेगमा आएर औंला काटिदिएको र पोलेर खाएको वयान उनले प्रहरीलाई दिएकी छन् । रिसमी चन्द्रबहादुरकी जेठी श्रीमती हुन् । चन्द्रबहादुरले ६ वटी श्रीमती बिहे गरेको तर जेठी श्रीमतीसँग बस्दै आएको स्थानीय बताउँछन् । रिसमीको एकछिनको रिसले उनलाई प्रहरी खोरमा पु¥याएको त छ नै श्रीमानको औंला अब सम्भवतः सदाका लागि गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।